Niverina nohadihadiana Rajaonah Mbola: nentina teny amin’ny Bianco koa Razaimamonjy Claudine | NewsMada
Niverina nohadihadiana Rajaonah Mbola: nentina teny amin’ny Bianco koa Razaimamonjy Claudine
Mety misy ifandraisany ? Mbola niverina teny amin’ny Bianco eny Ambohibao indray ilay mpandraharaha, Rajaonah Mbola, omaly. Voalaza fa antontan-taratasy hafa indray izao nampiantsoana sy nanadihadiana azy izao. “Vita izany izao ny fanadihadiana azy tety tao anatin’ny roa andro”, hoy ny teny fohy nataon’ny mpisolovava azy. Hany fantatra manodidina izao raharaha izao ny momba ny hosoka amin’ny fadin-tseranana. Tsy voafaritra izany na tohin’io ihany na antontan-taratasy hafa mihitsy indray izao namotopotorana azy izao.
Mifandray ireto samy mpandraharaha ireto?
Ankoatra izany anefa, anisan’ny nentina tamin’ny alalan’ny “taxi” niditra teny amin’ny Bianco koa, omaly, ihany Razaimamonjy Claudine. “Tsy misy ifandraisany amin’ny raharaha nampiantsoana an-dRajaonah Mbola ny fanadihadiana azy ety amin’ny Bianco”, hoy ihany ity mpisolovava ity. Tsy mazava izany, hatreto, na mety mifandray na resaka hafa mihitsy koa izao fampiantsoana ity vehivavy mpandraharaha ity teny Ambohibao izao.
Nahazo LP Razaimamonjy Claudine…
Tsiahivina rahateo fa nahazo fahafahana vonjimaika (LP) amin’ny raharaha iray amin’ireo 18 naha voarohirohy azy ity tandapa teo aloha sady mpandraharaha ity, ny volana septambra teo. Tsy nisy porofo nahafahana nitanana azy ny raharaha fanamboarana ny sekoly teknika ao Ambalavao, nanenjehana ity vehivavy mpandraharaha ity. Mbola misy raharaha hafa 17 mahatafiditra azy momba ny fanodinkodinam-bolam-panjakana sy ny resaka tsenam-baro-panjakana koa anefa, tsy mbola nanadihadiana azy. Mbola mijanona tanana vonjimaika (MD) any amin’ny fonja any Manjakandriana izany hatramin’izao Razaimamonjy Claudine.